Indlu ebukekayo eneminyaka engama-300 edolobheni elidala laseVictoria - I-Airbnb
Indlu ebukekayo eneminyaka engama-300 edolobheni elidala laseVictoria
Victoria, Gozo, i-Malta
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-Simon
Isiphithiphithi semigwaqo emincane emazombezombe kanye nemizila engaqondakali, ebekwe phansi kwe-Citadel, yakha ingxenye enkulu yekota yenkathi ephakathi yeNhloko-dolobha yasendulo yaseGozo iVictoria.
I-Tal-Bizzilla, iyigugu lezakhiwo, indawo yokuphumula yangempela enhliziyweni yaleli dolobha elinomlando nelingenangqondo.
Njengoba ihlalwa ngokuqhubekayo amakhulu eminyaka, lesi sikhala esincane, esihle sisanda kubuyiselwa ukuze sibhekane nokunethezeka kwesimanje kuyilapho sigcina ubuqiniso baso obungenakuqhathaniswa kanye nesimilo.
Ukuze uthole ukucwiliswa okuphelele empilweni ye-Gozitan, ubusuku obumbalwa e-Rabat endala iyadingeka. I-Tal-Bizzilla ithwebula umnyombo womlando walesi siqhingi esihle esinesiyaluyalu kanye nomlingo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Victoria namaphethelo